Warshadda Alaabta | Soo -saareyaasha Alaabada Shiinaha, Alaab -qeybiyeyaasha - Qeybta 4
Cosmetic peptide Acetyl hexapeptide-38 oo loogu talagalay adkeynta bresat iyo qeexidda wajigaCAS 1400634-44-7
Acetyl Hexapeptide-38 wuxuu kiciyaa soo-dhoweeye firfircoon oo firfircoon oo firfircoon Gamma coactivator 1a (PGC-1a), kor u qaadista heerka adipogenesis.Tani waxay horseedaa isu-uruurinta lipid-ka sare iyo kobaca mugga meelaha la rabo sida naaska iyo dhabannada.
Cosmetic peptide Acetyl hexapeptide-3 / Acetyl hexapeptide-8 (Argireline) oo loogu talagalay laalaabkii ka hortagga CAS 616204-22-9
Acetyl Hexapeptide-3 (oo sidoo kale loo yaqaan Argireline) waa peptide qurxinta ka-hortagga gabowga oo ka samaysan borotiinno dabiici ah. Waa silsilad peptide ah oo ka samaysan asiidh amino. Acetyl Hexapeptide-3 ayaa lagu muujiyey daraasado cilmi baaris ah si ay gacan uga geysato yareynta saameynta muuqda ee gabowga iyadoo gacan ka geysaneysa yareynta laalaabkii qotada dheeraa iyo khadadka ka dhaca hareeraha foodda iyo indhaha.
Cosmetic peptide Acetyl hexapeptide-1 budada cadar ka-hortagga bararka iyo ilaalinta
Acetyl hexapeptide-1 waa peptide xakameeya melanin oo u muuqda inuu kicinayo wax soo saarka maqaarka ee melanin. Waxaa la sheegay in lagu daydo habka difaaca dabiiciga ah ee maqaarka ee uVB. Waxaa laga helay badeecooyinka ilaaliya qorraxda iyo alaabooyinka daweeya dhibcaha da'da ama qorraxda.
Cosmetic Peptide Oligopeptide-34 oo loogu talagalay dhalaalka maqaarka
Oligopeptide-34 waa molecule yar oo borotiin ah, oo sidoo kale loo yaqaan peptide. Waxay ka kooban tahay 13 amino acids oo soo baxay oo wax ka qabta sameynta melanin. Oligopeptide-34 waxay hoos u dhigtaa dhaqdhaqaaqa tyrosinase iyo isku-darka melanin ee unugyada midabka maqaarka (melanocytes).
Bixinta warshadda oo tayo sare leh budada iodide Ammonium CAS 12027-06-4
Budada Ammonium iodide
Sahayda warshadda 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate EMIMBF4 CAS 143314-16-3 oo leh qiimo wanaagsan
Daahirsanaanta Sare Steroids Nandrolone Decanoate CAS 360-70-3 oo leh qiimo wanaagsan
Sahayda warshadda 2-Nitrobenzaldehyde/O-Nitrobenzaldehyde CAS 552-89-6 oo leh qiimaha ugu fiican
<< <Hore 123456 Xiga> >> Bogga 4/36